Ukungazi kubeka iNazca engcupheni | Izindaba Zokuhamba
Ukuntuleka kokuqwashisa kubeka uNazca engozini
EPeru, phakathi kwamadolobha aseNazca nasePalpa, enye yezimfihlakalo ezidume kakhulu zemivubukulo yesikhathi sonke ikhona. Kuleli hlane kuneqoqo lama-geoglyphs amakhulu abonakala kuphela kusuka ekuphakameni okuthile, akha izibalo zezilwane, zabantu nezejometri. Zadalwa yisiko lamaNazca phakathi kuka-200 BC kanye no-600 AD futhi selokhu abavubukuli baqala ukuzifunda ngawo-XNUMX, kwavela imibono eminingi ngemvelaphi nencazelo yayo, yize iseyimpicabadala.
Imigqa yeNazca ingumcebo kazwelonke wasePeru futhi bayigada ngentshiseko. Kodwa-ke, iNazca ayiphephile kuzo zonke izingozi ezisongelayo. Noma yikuphi ukuwa kwezinyawo endaweni, ngenxa yento kanye nezimo zezulu, kuhlala kumakwe izinkulungwane zeminyaka futhi noma yimuphi umonakalo wangempela okhiqiziwe awunakulungiswa.
Ngeshwa, ukuntuleka kokuqwashisa ngokuzwela kwale ndawo eminyakeni yamuva kuholele ochungechungeni lwezenzo ezilimaze kakhulu iNazca.
1 Umonakalo owenziwe eNazca
2 Imibono mayelana neNazca, uyini umsuka wayo?
3 Ameleni amaNazca Lines?
Umonakalo owenziwe eNazca
Okusha kakhulu futhi okucekela phansi kakhulu kubo kwenzeka ngoJanuwari owedlule, lapho umshayeli wenkampani yezokuthutha angena eNazca Pampas yize kwakukhona izimpawu ezazixwayisa ngenye indlela futhi zadala nomonakalo omubi. endaweni yokuvubukula endaweni engamamitha ayi-100. Ngenxa yalokhu, imikhondo ejulile ishiywe phansi ethinte izibalo ezintathu kwezineminyaka eyinkulungwane ubudala ezidwetshwe esihlabathini.
Ngokusobala le ndoda ibingazi ngesimo sendawo yakhona futhi yangena eNazca Pampas ngoba imoto yayo ibinenkinga yamathayi. Kodwa-ke, uMnyango Wezamasiko wasePeru ubike ukuthi uzomgxeka ngobugebengu umshayeli esitatimendeni.
Kepha iNazca Lines yayivele ilimele ngaphambilini. Ngo-2014, ngesikhathi seNgqungquthela Yezulu Ye-UN eyayibanjelwe eLima, izishoshovu zenhlangano iGreenpeace zangena endaweni futhi, endaweni lapho i-hummingbird geoglyph ikhona, zafaka izinhlamvu eziningana ezinkulu ngomlayezo “Isikhathi sokushintsha! Ikusasa liyavuseleleka. Uxolo olukuhlazana. " kubonakala kuphela esibhakabhakeni. Ngemuva kwalesi siyaluyalu, abakwaGreenpeace bazamile ukuxolisa ngomonakalo owenzeke kule ndawo, obevele ungenakulungiswa.
Ngemuva konyaka, ngoSepthemba 2015, isihloko sangena kule ndawo futhi sabhala igama lakhe kwenye yama-geoglyphs. Le ndoda ibigadwe yimilindeli ebiphethe ukuvikela uNazca yabe isidluliselwa kumshushisi.
Imibono mayelana neNazca, uyini umsuka wayo?
Ekuqaleni, abavubukuli babecabanga ukuthi imigqa yeNazca iyizindlela ezilula nje, kepha ngokuhamba kwesikhathi eminye imibono yathola amandla agcina ukuthi "izindawo zokukhonzela" zenzelwe ukujabulisa unkulunkulu wezindawo eziphakeme.
Namuhla siyazi ukuthi izakhamizi zaseNazca zakha ama-geoglyphs ngokususa amatshe ebusweni ukuze kubonakale itshe elimhlophe elingaphansi ngaphansi. Ngaphezu kwalokho, sibonga abacwaningi abaningana abavela eYamagata University eJapan, siyazi ukuthi kunezinhlobo ezine ezihlukile zezibalo ezijwayele ukuhlangana ndawonye emizileni ehlukene enendawo efanayo: idolobha langaphambi kwe-Inca laseCahuachi. Namuhla kusele iphiramidi elilodwa kuphela elime, kepha ngesikhathi salo sobukhosi kwakuyisikhungo sohambo oluyisilinganiso sokuqala nenhloko-dolobha yesiko lamaNazca.
Ngokusho kwabavubukuli baseJapan, izibalo zeNazca zakhiwa okungenani amasiko amabili ahlukene anamasu nezimpawu ezahlukahlukene, ezingabonakala kuma-geoglyphs alanda indlela esuka endaweni adabuka kuyo eya edolobheni laseCahuachi.
Baphinde bathola ukuthi imidwebo ishintshe kakhulu esifundeni esiseduzane neNazca Valley kanye nomzila osuka lapho uye eCahuachi. Kuleyo ndawo kunesitayela esihlukile sezithombe, esivezwa ngaphezu kwakho konke ngokukhombisa izidalwa ezingaphezulu kwemvelo namakhanda sengathi yizindebe. Iqembu lesithathu lama-geoglyphs okungenzeka lakhiwa yiwo womabili amaqembu litholakala ethafeni laseNazca, isikhala esiphakathi nendawo phakathi kwamasiko womabili.
Ngokusho kwabavubukuli baseJapan, ukusetshenziswa kwezibalo zeNazca kwashintsha ngokuhamba kwesikhathi. Ekuqaleni zadalelwa izizathu zesiko kuphela, kepha kamuva zabekwa eceleni komgwaqo oholela eCahuachi. Ngokuphikisana nalokho abanye abakucabangayo, ngokusobala lezi zibalo bezingasetshenziswanga ukumaka indlela yokuhambela, ngoba kufanele ngabe imakwe kahle, kepha ukuveza imibono, futhi kuyenze ibe nesiko.
Kodwa-ke, abantu abaningi bazamile ukunikeza impendulo encazelweni yemigqa yeNazca futhi kunemibono eminingi ngemvelaphi yayo. Isazi sezibalo uMaría Reiche wathonya uPaul Kosok ngokufaka umbono wokuthi le midwebo yayinencazelo yezinkanyezi. Abavubukuli uReindel no-Isla bemba izindawo ezingaphezu kwama-650 futhi bakwazile ukulandela umlando wesiko elidale le midwebo. Ukulethwa kwamanzi bekuqakatheke khulu esifundeni ngombana kulihlane. Imidwebo yakha indawo yesiko okumele inhloso yayo kube ukukhuthaza ukunxuswa konkulunkulu bamanzi. Abavubukuli bathole izintambo nezigxobo lapho laba bantu balandela khona imidwebo.
Ameleni amaNazca Lines?
Imidwebo yeNazca iyi-geometric futhi ingokomfanekiso. Ngaphakathi kweqembu elingokomfanekiso sithola izilwane: izinyoni, izinkawu, izicabucabu, inja, igwana, isibankwa nenyoka.
Cishe yonke imidwebo yayenziwe endaweni eyisicaba futhi kukhona okumbalwa kuphela emithambekeni yamagquma. Cishe zonke izibalo ezibekwe kuzo zimele izibalo zabantu. Abanye bathweswa imiqhele ngemigqa emithathu noma emine emile mhlawumbe emele izimpaphe zekhanda lomkhosi (ezinye izidumbu zasePeru zazigqoke amakhanda egolide nezimpaphe).
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » Peru » Ukuntuleka kokuqwashisa kubeka uNazca engozini